Gurigii Eng. Salaxudiin, oo Dad Jabsanaya Booliska Jarmalku Qabteen – Rasaasa News
Gurigii Eng. Salaxudiin, oo Dad Jabsanaya Booliska Jarmalku Qabteen
Oct 4, 2010 Gurigii Eng. Salaxudiin, Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF, oo Dad Jabsanaya ay Booliska Jarmalku Qabteen, peace, salaxudiin
Germany, [Oct 4, 2010] – War aanu saaka ka helay magaalada Karlsruhe ee dalka Jarmalka ayaa sheegaya in Dambiile Jwxo-shiil iyo Jiiskii Jarmalka joogay oo doonaya in ay jabsadaan gurigii Eng. Salaxudiin uu Boolisku qabtay shalay.
Jwxo-shiil, ayaa maalin dhawayd lagu sheegay Barlin Jermany, isaga oo aan la garanaynin u jeedo uu u tagay halkaas. Balse waxaa loo malaynayaa in uu wareeray oo uu ahaa raad qaad Eng. Salaxudin, isaga oo is leh bal in aad meelahaas ka hesho wax dad ah oo ka socda safaarada Itobiya.
Jwxo-shiil, wax dad ah oo ay xidhiidh leeyihiin waxaa Jarmalka ka jooga nin Jiis ah, oo waa Jwxo taageere u ahaan jiray, baryihii dambase Jwxo-shiil jeebka u galay [kuwii cagaha lahaa baa wax tari waayey]. Jaaliyad taageersan Jwxo-shiil, hal ruuxna ha ahaadee ma jiro, marka laga reebo saddex wiil oo ay isku reer yihiin oo iyagu dhaqan u leh qadyad been qabiil ku raaca.
Intii ayna Jwxo-shiil iyo Jiisku aadin Karlsrushe, ayaa waxay ku kulmeen miis xun oo qolka jiiska dhexyaal iyaga oo afar ruuxa ah. Qaar ka mid ah dadka Ogadeenka ah ee degan Barlin ayaa iswaydiiyey wajigii gubaygii ayaa magaalada lagu sheegaye ma aragteen. Mid baa yidhi war saakaan arkay oo aan waydiiyey maxaad haysaa, wuxuuna iigu jawaabay waxaba ma hayo Ogadeena waxba ma hayo.
Maalintii labaad oo shalay ahayd ayaa Jiiska iyo Jwxo-shiil, lagu qabtay iyaga oo isku dayaya in ay jabiyaan guriga Salaxudiin.
Booliska ayaa kolkii dambe sii daayey kolkay iska dhigeen in ay saaxiibo yihiin oo uu uga tagay fure khaldan.
Malahayga waxaa qabtay Jwxo-shiil hunguri xumadii lagu sheegayey, oo wuxuu is yidhi Itobiyaa Salaxudiin Doolar guriga uga buuxisay ee inta uu maqan yahay baadho.
Sida la sheegay gurigu wuu nabad qabaa gar-garaac yar mooyee waxba ma gaadhin, sidaasina waxaa sheegay mid ka mid ah saaxiibada Salaaxudiin ee magaalada.
Saaxiibada Salaxudiin ayaa aad uga cabsi qaba nimanka Jabinaya guriga laga maqan yahay hunguri dartii in ay marar badan u soo dhici doonaan Engneerka kolka uu soo noqdo.
Waxaa wax lala yaabo ah in Salaxudin ummad buu wanaag u raadinayeye in uu Jwxo-shiil moodo in Itobiya ay lacag siisay ama uu doontay. Waa dhibaato hadii uu Jwxo-shiil mooda arinta nabadaynta ee la wadoo in lacag farqaha la isugu shubayo.
Shirweynihii Qaran ee Qabridahare oo Soo Gaboobay iyo Xubno ONLF, oo Addis Ababa ku Soo Laabtay
Garissa oo Laba Beelood ay Dhiig Iska Daadiyeen